Umfundi owenze ifilimu yopopayi, uNks Kayleigh Gemmell.
I-The Next Few Months - okuyifilimu yopopayi yabafundi ebenza iziqu zobuciko yomfundi owenza iMastazi kwezobuCiko, uNks Kayleigh Gemmell - izodlala kwi-Annecy International Animation Film Festival e-France ngasekupheleni kwalo nyaka.
I-Annecy umncintiswano wamafilimu opopayi ayizinhlobo ezehlukene okukhona kuzona imidwebo, izingqwembe nemifanekiso edwetshwe ngekhompyutha.
Ifilimu, ephakathi kwamane aseNingizimu Afrika akhethiwe, iyingxenye yezifundo zocwaningo zika Gemmel kwi-Digital Art and Animation Studies ngesihloko semibhalo enezithombe zopopayi nokuthi ingemukeleka yini njengendlela eveza izindaba eziphathelene nemibhalo.
Ifilimu ngokwayo ingumbhalo wopopayi oxoxa ngemiphumela yesifo esingelapheki, empeleni ixoxa ngoyise kaGemmel owatholakala enomdlavuza ngonyaka wezi-2018. Ifilimu ilandisa ngokutholakala kokugula kwakhe nokwelashwa ngeso lalabo abamthandayo, lapho okusetshenziswa khona izindlela ezehlukene ukuveza imiphumela yokwelashwa emzimbeni nasemqondweni.
‘Inselelo enkulu yefilimu bekuwukudingida isihloko, ngenxa yokuthi bekuyinto ethinta umuntu. Nakuba ifilimu ibiyelaphana ngokuthi inginike ithuba lokubhekana nokwelashwa kukababa kodwa kubebuhlungu kakhulu ukuphinde ngizwe ubuhlungu engabuzwa ngesikhathi sibhekene nobunzima obukhulu, kimina nakubantu basekhaya,’ kusho u-Gemmell.
Ubona i-Annecy njengento emqoka kubafundi ‘ngoba iyingosi yokuthi bafunde, bakhule, bakhuthazeke.’
Ikhethwe emunxeni yamafilimu okwethweswa iziqu, u-Gemmell uthe ifilimu ibe indlela yokuthi abethweswa iziqu bakhombise umsebenzi wabo ovame ukunganakwa ngenxa yokushoda kwezimali, ukukhangiswa, nokuswela amava. ‘Ekugcineni inika abafundi ithuba lokwaziwa ezingeni lomhlaba ebantwini okungenzeka ukuthi bayathanda ukubeseka noma ukubanika umsebenzi.’
U-Gemmell weluleke abanye abenza amafilimu namanye amaciko ukuthi basebenze ngokuzikhandla nangobuhlakani. ‘Kulula ukuthi unake indaba yobunzima kanti futhi kulula ukuthi ugxile kweminye imicabango “emihle,' kusho yena.
‘Ungazibukeli phansi, ziqhenye, uziqhenye nangomsebenzi wakho. Sivame ukungaboni izinto ezinkulu ezikithina kanti loko kusinqanda ukuthi sithathe amagxathu aya phambili nokusebenzisa amathuba esiwatholayo.’
U-Gemmell uhlela ukuphinde aye phesheya, athole amava okufundisa. ‘Ngifundisa IsiNgisi eZhongshan eShayina, okuyinto engikholwa ukuthi izongikhulisa ingiphe ikhono lokuba uthisha ongcono.’
Ifilimu ingabukwa enkundleni yamavidiyo i-Vimeo ku: https://vimeo.com/368453877